Vacuum packs - Utien Pack Co ,. Ltd.
Manitatra ny androm-piainan'ny vokatra
Ny fonosana vakumana dia afaka mampiadana ny fitomboana sy ny fananahana ny zavamiaina bitika amin'ny alàlan'ny fanesorana ny entona voajanahary ao anaty fonosana, mba hanitarana ny andian'ny vokatra. Raha ampitahaina amin'ny vokatra fonosana tsotra, ny vokatra fonosana banga dia mampihena ny habaka fonenan'ireo entana.
Ny fonosana vacuum dia mety amin'ny karazan-tsakafo rehetra, vokatra ara-pahasalamana ary entin'ny mpanjifa indostrialy.
Ny fonosana vacuum dia afaka mitazona ny kalitaon'ny sakafo sy ny fihavaozana mandritra ny fotoana maharitra. Ny oksizenina ao anaty fonosana dia nesorina mba hisorohana ny famokarana zavamananaina aerôbika ary hampiadana ny fizotran'ny oksiômanika. Ho an'ny entan'ny mpanjifa sy ny vokatra indostrialy, ny fonosana banga dia afaka mitana ny andraikitry ny vovoka, hamandoana, anti-harafesina.
Ny fonosana vacuum dia afaka mampiasa milina famonosana thermoforming, milina famonosana efi-trano ary milina fanodinana paompy ivelany ho an'ny fonosana. Amin'ny maha fitaovana amina fonosana tena mandeha ho azy azy, ny milina famonosana thermoforming dia mampiditra fonosana an-tserasera, famenoana, famehezana ary fanapahana, izay mety amin'ny filan'ny famokarana sasany amin'ny fangatahana avo lenta. Ny masinina famonosana lavaka sy ny masinina famonoana paompy ivelany dia mety amin'ny orinasa mpamokatra andiany kely sy salantsalany ary kitapo banga no ampiasaina amin'ny fonosana sy famehezana.